आजको दिन ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार…… – SUDUR MEDIA
August 4, 2021 AdminLeaveaComment on आजको दिन ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कतिमा हुँदैछ कारोबार……
काठमाडौँ । आज साताको चौथो दिन अर्थात बुधबारको दिन नेपाली बजारमा सुनको भाउ घटेको छ । हिंजो मंगलबारको दिन स्थिर रहेको सुनको भाउ आज भने प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
छापावाल सुन हिजो प्रतितोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै आज तेजावी सुन प्रतितोला ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । तेजावी सुन हिजो प्रतितोला ९१ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
यस्तै आजको दिन नेपाली बजारमा चाँदीको भाउ भने बढेको छ । आज चाँदी प्रतितोला १२ सय ७८ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । चाँदी हिजो प्रतितोला १२ सय ७५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । लामो समयको कोरोना महामारी र लकडाउन सँगै ह्वात्तै बढेको सुन चाँदीको मूल्यमा पछिल्लो समय केही घट्बढ हुने गरेको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः विदेशी मुद्राको बिनिमयदरः कुन देशको विनिमयदर कति ! आज घट्यो की बढ्यो विदेशी बिनिमयदर…आज बुधबारको दिन नेपाली बजारमा अमेरिकी डलर सहित केही देशहरुको विनिमयदर घटेको छ भने केही देशको बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोके अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११८ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ११९ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ । यूरोपियन युरो एकको खरिददर १४० रुपैयाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १४१ रुपैयाँ ६९ पैसा रहेको छ ।
यूके पाउण्ड एकको खरिददर १६५ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १६५ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ । साउदी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६१ पैसा बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ७७पैसा तोकेको छ । कतारी रियाल एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तैगरी, यूएइ दिराम एकको खरिददर ३२ रुपैयाँ २८ पैसा तथा बिक्रीदर ३२ रुपैयाँ ४४ पैसा रहेको छ । मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २८ रुपैयाँ ९ पैसा तथा बिक्रीदर २८ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर ३९४ रुपैयाँ ७९ पैसा तथा बिक्रीदर ३९६ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेको छ। बहराइन दिनार एकको खरिददर ३१४ रुपैयाँ ४८ पैसा तथा बिक्रीदर ३१६ रुपैयाँ ७ पैसा रहेको छ ।
आफ्नो इच्छा अनुसार छोरा वा छोरी जन्माउने सजिलो तरिका यस्तो छ, गते र बारनै तोक्न सक्ने ! खर्च कति, हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)….
उर्लाबारीमा घट्यो रहस्यमय घ’टना, ८ बर्षीय बालकले गरे आ.त्मह.त्या ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)